Bogga ugu weyn 22 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama Aaladda Moobaylka sannadka 2022 -ka
Ma u baahan tahay lacag yar oo dheeraad ah? Maqaalkan, waxaan ku wadaagnaa apps lacag samaynta ugu fiican taasi waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad jeexdo jeebkaaga.
Waqti badan ma ku qaadataa taleefankaaga casriga ah? Waan ogahay waxaan sameeyo. Sida muuqata, keligay ma ihi.
In badan oo naga mid ah, taleefankeennu waa qayb muhiim u ah gacmaheena ama jeebkayaga oo markasta oo aan waqti haysanno, waxaan ku hubinnaa wararka, emaylka, warbaahinta bulshada ama waxaan ku dhex milmeynaa ciyaar nacasnimo leh oo leh heerar aan dhammaad lahayn.
Sida lagu sheegay daraasad dhowaan laga soo saaray Jaamacadda Trent ee Jaamacadda Nottingham, celceliska qaangaarka ah ee dhalinyarada ah ayaa hadda ku dhawaad ​​shan saacadood maalintii telefoonka marka aad heli karto barnaamijyada lacag ku siiya.
Ka warran haddii aad dhab ahaan lacag ku samayn lahayd soo dejinta Barnaamijyada Android oo lacag ku siinaya halkii aad waqti ku lumin lahayd iPhone -kaaga?
Ugu dambayntii, waxaad isticmaali kartaa lacag aad u badan si aad u abuurto codsiyo aad internetka ku isticmaali karto - in ka badan intaad moodeysay.
Haddii ay tahay lacag si toos ah loogu shubay xisaabtaada PayPal, a hadiyad cu iibso tafaariiqda aad jeceshahay, ama u soo celinta dhammaan wax iibsigaaga, ganacsiyada waxay jecel yihiin inay soo jiitaan isticmaaleyaasha app -ka cusub waxayna diyaar u yihiin inay lacag ku siiyaan! Haddii aad saddex meelood meel ka mid ah saacadahaaga soo -jeedinta taleefanka ku qaadato, helidda lacag yar oo dheeraad ah waxba kuma yeeli doonto.
Waxaan dhawaan go'aansaday inaan isku dayo qaar ka mid ah barnaamijyada ugu caansan taleefannada casriga ah iyo lacagta. Waxaan moodayay inay mudan tahay inaan isku dayo inaan tixgeliyo ku -tiirsanaanteydii ugu dambeysay ee ku tiirsanayd CandyCrush. Wax waa inay bixiyaan!
Barnaamijyada Lacag -sameynta ugu Fiican 2022
Liiskan barnaamijyada ugu wanaagsan ee lacag lagu sameeyo ayaa loo kala jabiyey qaybaha soo socda:
Barnaamijyada Sahanka Lacagta Sameynta
Lacag Caddaan ah iyo Codsiyada Baadhitaanka Rasiidka
Barnaamijyada Ku Bixiya Hawlaha Fudud
Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Iibinta Walxaha
Anigoo isku dayaya codsiyadan, waxaan la kulmay qaar guuldarrooyin ah oo aan go'aansaday inaan dhinac uga tago. Ka dooro liiskan oo wakhti kuma lumin doontid codsiyada dhalaalaya, ay adagtahay in la isticmaalo, iyo kuwa aan la keenin.
Markii aan tijaabiyay codsiyadan, waxaan la kulmay cillado aan go'aansaday inaan ka saaro liiska. Ka dooro liiskan oo aanad wakhti badan ku qaadan doonin codsiyada aan raaxo lahayn, ay adagtahay in la isticmaalo, iyo kuwa ka hooseeya celceliska codsiyada.
Liiskani wuxuu ka kooban yahay kaliya codsiyada ugu fiican ee lacag samaynta. Waxay samayn doonaan barnaamijyada lacagta ee taleefannada Android iyo barnaamijyada lacagta iPhone.
#1 Swagbucks - $ 10 Gunno
Sahan la'aan, abka Swagbucks shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lacag lagu kasbado. Swagbucks, waxaad ku heli kartaa lacag dheeraad ah lix siyaabood oo kala duwan. Waxaad sidoo kale heli kartaa $10 si aad lacag la'aan isugu diiwaan geliso.
Swagbucks, adeegsadayaashu waxay ku kasban karaan dhibcaha is-hubinta iyagoo daawanaya fiidiyowyo, ka jawaabaya sahanno gaagaaban, ciyaaro ciyaar, daalacashada internetka, ama iibsashada khadka tooska ah.
Waxaad markaa ku soo ceshan kartaa dhibcahaaga SB lacag caddaan ah oo si toos ah loogu shubay koontadaada PayPal ama adigoo kaarka hadiyadda ka codsanaya in ka badan 1,500 oo tafaariiqle ah (sida Walmart ama Amazon).
Wanaagsan, ma laha wax xad ah oo aad ku guuleysan karto. Ma beddeli doonto dhammaan dakhligaaga, laakiin haddii aad isticmaasho Yahoo! U ciyaar qaar ka mid ah ciyaaraha biraawsarka oo ka qaybgal codbixinta.
Ma jirto sabab aadan ugu kordhin karin dakhligaaga ugu yaraan $100 bishii. Marka la eego qiimeynta A + ilaa BBB iyo in ka badan USD 166 milyan oo horay loo siiyay xubnaheeda, ma jirto sabab aan loo tijaabin apps-ka ugu mushaarka badan.
#2 MyPoints - 10 € gunno
Ma rabtaa 10 € dhowr daqiiqo? MyPoints waa mid ka mid ah codsiyada wax-ku-oolka ah ee bixiya $ 10 adeegsadayaasha cusub.
Laakiin taasi ma dhammayn.
Marka ay rakibaan abka oo u isticmaalaan si joogto ah, isticmaalayaashu waxa ay urursadaan dhibco ay ku soo furan karaan lacag caddaan ah, kaadhadhka hadyada, ama hadiyadaha jidheed.
Asal ahaan waa barnaamij abaalmarin ah taleefankaaga… waana sidaad u fiirin lahayd.
Codsiyadaas oo lacag soo saara maaha kuwo aad u hodan ah. Hadafkiisu waa inuu ku daro dhowr doolar natiijooyinkaaga bil kasta adoo samaynaya waxaad hore u samaysay.
Oo xitaa haddii ay jiraan dad dakhligayga burburiya, waxaan ku maareeyaa inaan sameeyo wax ka yar $ 50 oo kaararka hadiyadda ah bil kasta (PayPal aniga).
Waa $ 600 sanadkii, taas oo aan ku badbaadin karo anigoo ka gudbaya teleefankayga fiidiyowyada iyo samaynta sahan la'aan marka aan daawado TV-ga. Ka fakar waxa aad ku samayn karto $600 dheeraad ah. Waxaad halkan iska diiwaan gelin kartaa ciwaanka emailkaaga ka dibna kala soo bixi kartaa mobaylka app-ka.
#3 Raadinta Pinecone
Dhibaatada haysata codsiyada badan ee codbixinta ayaa ah inay noqon karaan khasaare weyn oo aan lahayn abaalmarin. Taasi waa sababta aan u jeclahay Cilmi -baarista Pinecone. Sahan kasta, lacag dhan $ 3 ayaa la bixiyaa oo inta badan waxaa laguugu dari doonaa sahanno u dhigma danahaaga iyo tirakoobka dadka.
Araajida Tickets Tickets iyo Rasiidhada
#1 Ebates - $ 10 Bonus
Barnaamijyada waxtarka u leh iPhone-barnaamijka moobiilka ee Ebates, waxaad u badan tahay inaad ka maqashay Ebates kombiyuutarrada desktop-ka, laakiin sidoo kale waxay leedahay barnaamij mobiil. Waxa aan ka jeclahay Ebates waa sahlanaanta isticmaalka iyo siyaasadda lacag -bixinta deeqsinimada leh.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ka dukaameysato dukaamada aad jeceshahay (online ama qof ahaan), oo waxaad lacag ku heleysaa wax soo iibsigaada. Dhacdooyinka gaarka ah, ciidaha iyo xayaysiinta, waxaad soo kaban kartaa ilaa 12% xaaladaha qaarkood.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho app-ka oo aad hesho tafaariiqda aad rabto inaad wax ku iibsato. Waxay si toos ah u tagaan bakhaarkooda internetka waxayna si toos ah u helaan gunno marka ay iibsadaan. Waxaad ku soo furan kartaa abaal-marinnadan lacag caddaan ah, kaadhadhka hadyada, ama deebaajiga PayPal.
Waa maxay qabow ayaa ah inay ku darto sicir -dhimis/koodhadh aad hore u haysatay.
Si ka sii fiican, eBates waxay siisaa isticmaaleyaasha cusub $ 10 si ay isu diiwaangeliyaan. Waa kan imtixaankeenii oo dhammeystiran.
#2 Ibotta - $ 10 Gunno
Samee Barnaamijyada Lacagta ee Taleefannada Android - Score Ibotta ScreenshotIbotta waa codsiyo kale oo lacag sameeya oo aad ku aragto liiskan.
Si ka duwan kuwa kale, Ibotta aad bay caan uga tahay adduunka oo dhan maadaama ay daboolayso shaabadaha cuntada waxayna leedahay barnaamij iskaashi oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay casuumaan saaxiibbada oo ay kasbadaan xitaa lacag badan.
Waxaad lahaan doontaa kaliya $ 10 si aad isu qorto iyo $ 5 dheeraad ah saaxiib kasta oo aad ku taliso.
Awoodda dakhligaagu waa mid aan xad lahayn. Ma xuma, maadaama aad saaxiibbadaa ka caawineyso inay lacag keydsadaan adiga oo siinaya toban doollar oo dheeraad ah.
Fiiri imtixaankayaga Ibotta oo dhammaystiran si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegsiga lacagtan si loo abuuro app.
#3 Xoosh - $ 5 Bonus
Xoosh waa codsi casri ah oo kuu oggolaanaya inaad lacag ku soo ceshato mar kasta oo aad wax ku dukaameysato kaarkaaga deynta ee goobaha ka qeybqaadanaya.
Inaan la dhaafin caqabadaha si lacag loo sameeyo ayaa laga yaabaa inay tahay faa'iidada ugu weyn ee Dosh. Tusaale ahaan, waxaan helaa lacag Exxon mar kasta oo aan buuxiyo haanta gaaska oo aan dhawaan ogaaday. Lacagta waxaa lagu shubayaa koontadayda dosh.
Kaliya soo dejiso arjiga, isku xira kaarkaaga deynta (taasi waa hubaal) oo aad dukaameysaneyso. Waxaad u adeegsan kartaa kaarkaaga amaahda si aad uga dukaameysato ganacsatada ka qeybgaleysa isla markaana dhibcaha waxaa isla markiiba lagu xisaabin doonaa Boorsadaada Dosh. Marka dheelitirkaagu gaaro ugu yaraan $ 25, waxaad ku samayn kartaa deebaajigaaga dhigaal toos ah ama PayPal. Waxaad ka akhrisan kartaa dib -u -eegistayada oo dhan ee dosh halkan.
#4 Qaadashada Doofaarka
Soo dhawaynta App-kan waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee aan isku dayay walina waa kan aan jeclaa. Had iyo jeer ma aqbalaan isticmaalayaasha cusub. Si joogto ah u hubi haddii aadan isku xiri karin.
Barnaamijkan, waxaad ku heli kartaa dhibco risiidh kasta oo la malayn karo, marka laga reebo maqaayado iyo dukaamo fara ku tiris ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli u baahan tahay inaad iska baarto rasiidhadan maadaama ay ku kaydsan yihiin sawirrada billaha ah.
Dakhli Dadban Samee Lacag Apps
#1 Acorns - $ 5 Gunno
Haddii aad rabto inaad bilowdo kaydinta mustaqbalkaaga oo aad maal gasho hawlgab, waa inaad isku daydaa Acorns. Kani waa app bilow ah oo kaa caawinaya inaad ku maal gashato taleefankaaga casriga ah.
Acorns hadda waxay bixisaa gunno is-qoris ah oo ah $ 5 akoonnada cusub ee la furay. Markaad iska qorto koontadaada, Acorns waxay ku shubi doontaa koontadaada $ 5 BILAASH ah si maalgashigaagu u bilaabo bilow.
#2 Nielsen - $ 50 sanadkii
Ma maqashay qiimeynta Nielsen ee bandhigyada TV -ga? Waa hagaag, waxay soo baxday in Nielsen uu ururiyo xog aad u badan marka loo eego telefishanka. Meel ay si dhab ah u yaqaaniin waa adeegsiga internetka.
maxay taasi adiga kugu tahay? Tani waxay ka dhigan tahay in Nielsen uu ku siinayo $ 50 sannadkii si aad app-ka ugu ilaaliso browserka internetka ee aad jeceshahay.
App-ka laftiisu waxa uu ururiyaa xisaabaadka ku saabsan isticmaalka interneedkaaga si qarsoodi ah, markaa uma baahnid inaad ka walwasho xogta lagugu xidhay. App-ku waxa uu qaadanayaa meel yar mana hoos u dhigo talefankaaga casriga ah ama tablet-kaaga gabi ahaanba!
Stash wuxuu fududeeyaa maalgashiga. Taasi waa wax u wanaagsan dadka intiisa badan. Haddii aad tahay maalgaliye khibrad leh, waxaa laga yaabaa inaad u aragto app -ka mid aad ugu fudud dhadhankaaga (laakiin taasi waa barta).
Stash ayaa shaqada ugu badan kuu qabta. Waxaad dooranaysaa waxaad xiisaynayso (sida farsamada, tamarta nadiifka ah, ama dukaamada tafaariiqda ah), Stash -na wuxuu siin karaa isticmaale isticmaale kala duwan oo faylal kala duwan ah. Halkaas, waxaad ka samayn kartaa app -ka si aad laba doollar toddobaadkii ugala soo baxdo koontadaada bangiga oo aad ballaariso istaraatiijiyadda maalgashigaaga.
Haddii aad xiisaynayso maalgashi laakiin aadan aqoonin sida loo bilaabo, ku bilow kaliya $ 5 oo hel inta kale ee kaashka ah. Wanaagsan, Stash wuxuu ku heli doonaa $ 5 kaliya si aad u bilowdo.
* DollarSprout waa lammaane/Lamaane Lacageed oo Stash ah. Adeegyada la-talinta maalgashiga ee Stash Investments LLC, lataliyaha maalgashiga ee ka diiwaan gashan SEC. Walaxdan waxa loo qaybiyay ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho oo keliya oo looguma talogelin maalgelin, sharci, xisaabin, ama talo cashuureed. Maalgelinta waxay ku lug leedahay khataro.
Slidejoy wuxuu ku jiraa liiskan maxaa yeelay shaki la'aan waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fudud ee lacag lagu sameeyo. Uma dhahayo taas maxaa yeelay waxay kaa dhigi doontaa hodan. Ma noqon doonto Sida laga soo xigtay soo-saareyaasha, tani waxay ku siin doontaa qiime dhan $ 5-15 bishii.
Sidee ayuu u shaqeeyaa barnaamijkan lacagta qaataa? Slidejoy Pro:
Markaad shiddo taleefankaaga, waxaad shaashadda qufulkaaga ku arki doontaa muuqaal bilicsanaanta ka farxiya. Markaas,
Waad iska indho tiri kartaa xayeysiiska adiga oo dhinaca midig u seexanaya oo furaya taleefankaaga
Waxa kale oo aad la falgali kartaa xayeysiiska adiga oo ku simanaya dhinaca bidixda Haddii aad u leexato dhinaca bidix, taleefanku wuu furmaa oo waxaad ku jihaysan tahay meel xayeysiiyaha cayimay (YouTube, websaydhka xayeysiiyaha, Google Play, bogga kuubanka, iyo wixii la mid ah).
Si aad uga fogaato dhalanrog, waa inaad bixisid isku mid iyadoon loo eegeynin inaad xayeysiis ku shaqeyso iyo haddii kale
Waqti ka dib, Slidejoy wuxuu bartaa doorbidkaaga xayeysiiska oo ku saleysan habdhaqankaaga waqtiyo kala duwan oo maalinta ah wuxuuna hagaajiyaa khibrad isticmaale oo aad u habboon.
Waxaad kala laaban kartaa dakhligaaga adoo adeegsanaya kaadhadhka hadiyadaha ee Paypal / badan ama ugu deeqi kara samafal
Ilaa iyo inta aad u adkaysan karto shaashadda qufulka ee taleefankaaga casriga ah sida wararka isbeddelka ah ama xayeysiisyada (kuwaas oo baaba'a marka aad furato taleefankaaga), waxaad haysataa 180 euro sanadkii (ama ka badan).
Slidejoy wuxuu leeyahay lacag -bixintu dhab ahaantii way kordhaysaa maadaama xayeysiisyadu ay aad ugu habboon yihiin danahaaga. Ma sheegaan inta ay le'eg yihiin, laakiin helitaanka $ 200 sannadkii waa in aanay noqon mid aad u adag. Uma xuma iibinta shaashaddaada dalabka ugu sarreeya (macno ahaan).
Barnaamijyada Lacag -Sameynta ee Aad Ku Bixiso Hawlaha Fudud
Kuwani waa qaar ka mid ah apps-ka aan ugu jeclahay liiskan, sababtoo ah waxay u baahan yihiin xoogaa dhib ah. Haddii aad diyaar u tahay inaad wakhti geliso, soo dejinta abkaan oo aad qabato shaqada waxay noqon kartaa faa'iido badan!
Maalmahan, dad badan ayaa bilaabay qaybinta cuntada iyada oo loo marayo Uber Eats, hab dabacsan oo fudud si ay lacag u helaan sida ku cad jadwalkooda. Waxaad bixin kartaa habeen iyo maalin mar kasta oo aad rabto. Haddii laguu oggolaado, si fudud u gal barnaamijka oo waxaad ka heli kartaa jadwalka gaarsiinta aaggaaga.
Iyada oo la adeegsanayo Uber Eats waxaad dooran kartaa habka gudbintaada. Iyadoo ku xiran magaaladaada, waxaad ku gaarsiin kartaa cunto baabuur, baaskiil ama mooto. Inta u dhaxaysa dhalmada, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad muusikada dhaqaajiso oo aad magaalada dhex mushaaxdo.
Markaad dhammaystirto dhalmada, waad aqbali kartaa codsiga soo socda ama aad iska qori kartaa saacado yar ama maalinta inteeda kale. Tirada dhalmada aad samayso adiga ayay kugu xidhan tahay. Iyo sida riwaayado kale, waxaad heli kartaa talo dhammaadka dhalmad kasta.
#2 Lyft - $ 300 gunno
Haddii aad haysato wakhti firaaqo ah oo aad ku nooshahay xaafad aad u mashquul badan, noqoshada darawalka Lyft waxay noqon kartaa faa'iido
Oo hadda, waxaa jira dallacsiin kaas oo qof kasta oo fuula uu helayo $ 300 oo gunno ah isla marka uu dhammeeyo lugtiisa 100aad. Haddii aad hadda bilowdo oo aad si adag u shaqayso dhammaadka toddobaadka, malaha waad furi kartaa gunnadan dhawr toddobaad ka dib markaad baabuurka waddo (marka lagu daro dakhligaaga caadiga ah).
Soo gal !!
Ma jeceshahay eeyaha?
Rover waa barnaamij soo ifbaxaya oo isku xira kuwa lugeeya eeyaha iyo ilaaliyayaasha kuwa leh eeyaha. Taas macnaheedu waa in aad hadda haysato fursad aad kula baxdo oo aad ku samaysato lacago!
Xanaanada xoolaha, khidmadaha goobta caadiga ah waxay u dhexeeyaan $ 25 illaa $ 100 habeenkiiba.
Booqashooyinka goobta 30 daqiiqo oo socod ah waxay u dhexeeyaan $ 10 illaa $ 30. Iyada oo la raacayo safarka xaafadda, si dhakhso ah ayay isugu dari kartaa!
Maadaama adeeggu wali yahay mid cusub, aaggaagu malaha wali kuma qancin xirfadleyaal xayawaan ah. Bilow ka hor intaan qof walba ogayn riwaayaddan cajiibka ah!
Instacart app screenshotInstacart waa app fudud oo kuu ogolaanaya inaad dukaan ka dukaameysato dadka neceb (ama aan haysan waqti) cuntada.
Adiga oo ah “iibsadaha raashinka gaarka ah”, waxaad tahay qofka wax iibsada oo geeya (ka taxaddar inaadan mooska burburin). Qaddarka tixgelintaada waxay kuxirantahay arrimo badan, sida cabbirka celceliska amaradaada iyo tirada celceliska kiiloomitir ee safar kasta. Waxaad sidoo kale heli kartaa talooyin marka lagu daro khidmadaha ay toos u bixiso Instacart.
Dadka badankoodu waxay soo sheegaan celcelis dakhli qiyaastii ah $ 15 saacaddii. Haddii aad u baahan tahay lacag degdeg ah, runtii waa wax la tixgeliyo.
Wali ma aanan tijaabin barnaamijka HealthyWage (maxaa yeelay waxaan ahay sabool runtiina waxaan rabaa inaan horumariyo muruqyadayda), laakiin haddii aad lumiso dhowr rodol, ma heli doontid $ 10,000.
HealthyWage waxay bixisaa siyaabo kala duwan oo lacag lagu kasbado: waxaad kaligaa ka qaybgeli kartaa loolanka miisaanka oo yaraada, ama ka qaybqaado tartan kooxeed oo midba midka kale ku dhiirrigeliyaa inuu lumiyo rodol badan. Lacag -bixintu waxay ku saleysan tahay boqolkiiba miisaanka oo yaraada, oo haddii aad maamusho inaad lumiso 10% miisaankaaga, waxaad ku maamuli kartaa tartanka lacag la'aan (adiga oo aan lahayn wax khatar dhaqaale ah).
Tani waxay dhaafsiisan tahay barkadaha shaqada oo dhan, halkaas oo aysan dadku lacag ku bixin, ama ka sii daran, tartanku marna ma wada bilowdo. Dadku had iyo jeer waxay raadiyaan saaxiibbo jirdhis si ay awood ugu yeeshaan. Laakiin ma taqaan waxa shaqo ka sii fiican sameeya? Jeebkaaga. Tag HealthyWage oo isdiiwaangeli maanta si aad lacag uga hesho miisaankaaga oo yaraada.
Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee Wax lagu Iibiyo
Airbnb waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee lacag lagu sameeyo. Haddii aad guri leedahay, waa inaad qolka u siisaa Airbnb si uu lacag uga helo qolkaaga. Degaanku wuxuu kaa caawin karaa inaad deymahaaga si dhakhso ah u bixiso, lacag u keydiso fasax cajiib ah ama xitaa aad abuurto dakhli buuxa.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Appbnb App?
Samee galitaan adiga oo buuxinaya sharraxaad, qaadista iyo gelinta sawirrada iyo dejinta qiimaha. Galitaankaagu wuxuu ka caawiyaa martida inay fikrad ka helaan meesha ay deggan yihiin.
Kadib deji xeerarka helitaanka iyo xeerarka guriga ee xayeysiiskaaga. Marka dalabkaaga la ansixiyo, waxaad ballansan kartaa joogitaankaaga guriga oo aad bilaabi kartaa samaynta lacag.
Si loo kordhiyo is aaminaadda martida iyo martida labadaba, Airbnb waxay u baahan tahay macluumaad xaqiijin, oo ay ku jiraan lambarada taleefanada. Booqashada kadib, qof walba wuxuu fursad u haystaa inuu qoro dib u eegis. Dib -u -fiirintu waxay ku qasbeysaa martida inay ula dhaqmaan martida iyo guryahooda si xushmad leh iyo inay hubiyaan in martidu ay ka dhigaan booskooda sida ugu macquulsan.
Waa kan tusaheena dhammaystiran ee martigelinta Airbnb.
Haddii aad gurigaaga ku haysato xidhmooyin DVD-yo ah, CD-yo, disc-yada Blu-ray-ga, ama ciyaaraha-fiidyaha, waxaad ku kasban kartaa dhawr doollar app-ka Decluttr dollar kasta. Waxay kaloo aqbaleen aaladaha elegtarooniga ah sida telefoonnada, tablet-yada, iyo konsollada ciyaarta.
Haddii aad haysato taleefan gacmeed, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad iska baarto barcode -ka shayga oo Decluttr wuxuu ku siin doonaa qiime deg -deg ah shayga. Ma jiraan xaraashyo ama khidmadaha diiwaangelinta nacasnimada ah sida eBay. Bixinta degdegga ah ee alaabta aadan mar dambe doonayn inaad isticmaasho. Jooji hagardaamada!
Waxa aan ka jeclahay codsigan waa sida ay u fududahay in la isticmaalo oo lacag lagu soo ceshado. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa iskaan barcode -ka maqaalka oo isla markiiba ogow inta aad heli karto. Marka uu tareenkaagu diyaar u yahay sanduuqa sanduuqa lacag -kaashka ah, waxaad ka heli doontaa sanduuqa boostada ee la sii -diyaariyey. Ma noqon karto mid fudud!
Offerup ScreenshotOfferUp waa barnaamijka iibinta ugu habboon uguna dabacsan ee aan waligay isticmaalay. Waxaad u qori kartaa maqaalladaada sida Craigslist, laakiin iibsadayaashu waxay leeyihiin astaamo aad arki karto. Haddii aadan rabin inaad la kulanto shisheeyaha, waxaad sidoo kale u diri kartaa alaabtaada oo aad ku bixin kartaa PayPal.
Ikhtiyaarkan, waxaad la yaabi kartaa haddii aad iibin karto qaran ahaan halkii aad ka iibin lahayd gudaha. Jawaabtu waa haa! ”. Tilmaamahan cusubi waa beddelkii ciyaarta. Waagii hore, waxaan soo taxay shay kadibna… barbecube. Markaas waxaan si lama filaan ah u xiisayn lahaa saddex ama afar qof hal maalin maqaalkayga. Awood u leh inaan ka iibiyo dhagaystayaal ballaadhan, si dhakhso leh ayaan uga takhalusi karaa ganacsigayga.
Ka fikir LetGo inay tahay isku darka Craigslist iyo Pinterest. Haddii aad doorbideyso inaad iibiso alaab shaqsiyeed halkii aad kula macaamili lahayd qof aadan garanaynin internetka, tani waa habka aad ku tagi karto. Si ka duwan eBay ama suuqyada kale ee internetka, LetGo gabi ahaanba waa bilaash. Kuma qaadaan khidmadda liiska liiska sarrifka saamiyada mana ka qaadaan iibka kama dambaysta ah.
Iibinta aaladaha kale, waxaad badiyaa lumisaa 10 ilaa 20% qiimaha ugu dambeeya ee shayga khidmadaha. Qabow Aan joogin LetGo. Haddii aad rabto inaad kasbato dhowr doollar maalmaha soo socda, tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee loo sameeyo, ku dhawaad ​​kharash la'aan.
#5 Buugga Scouter
Ma haysataa furashada buugga maxalliga ah oo aad inta badan isticmaasho? Taageero. Waxaad asal ahaan ku jirtaa naxariista dukaankan gaarka ah iyo rabitaankeeda ah inay ku siiso qiimo sax ah buuggaaga.
Maxaad ugu xallinaysaa kalidii -talis haddii aad u oggolaato nidaamka suuqa xorta ah inuu kuu shaqeeyo? BookScouter ha la barbardhigo qiimaha 44 bixiye, markaa dooro midka ku siin doona qiimaha ugu fiican (oo la mid ah Expedia duullimaadyada iyo hoteellada).
Iyada oo aan lahayn khidmadaha diiwaangelinta, kharash la'aan, iyo qiimaha ugu fiican ee buuggaaga, ma jirto sabab lagu iibiyo meel kale.
Haddii aad tahay sophomore oo dukaanka buugaagta uusan iibsan maxaa yeelay maahan dhibaatada ugu dambeysa ee ugu weyn suuqa, BookScouter waa saaxiibkaaga ugu fiican. Noqo mid caqli badan oo ka faa'iidayso maalgashigaaga waxbarashada.
Eeg sidoo kale: 9 shaqooyinka ugu fiican ee khadka tooska ah loogu talagalay dhalinyarada kuwaas oo bixin sidoo
Waxaa had iyo jeer jiri doona lacag lagu sameeyo codsiyada aad bixiso
Oo waa duub!
Hagaag, maaha runtii, waxaa jira codsiyo kale oo badan oo lacag sameeya. Haddii aad tahay qof firfircoon oo dhammaystiran, waxaad ku samayn kartaa lacag badan taleefankaaga casriga ah. Waqti badan ayaan ku qaataa ka shaqeynta blog-gan, laakiin wali waxaan helaa boqol doolar bishii anigoo huraya shaashadda taleefanka, ciyaaraha, iyo daawashada xayeysiiska.
Haddii aadan ka fikirin in shaqadaada la fududeeyo oo la buuxiyo tiro foomam diiwaangelin ah saacadda soo socota, hadda waxaad ku bilaabi kartaa waxyaabo badan oo liiska ku jira.
Haddii mid ka mid ah dalabyadan uu dhacayo ama aad taqaanno barnaamijyo kale oo faa'iido leh oo aan seegay, iigu soo qor faallooyinka hoose oo waxaan beddeli doonaa liistadayda!
12 Shabakadaha internetka oo aad wax ku qori karto isla markaasna lacag lagu siin karo
Mushaharka Billaha ah ee YouTubers oo leh in ka badan Hal Milyan oo Macaamiil ah
30 Suuqyada ugu Wanaagsan Online si loo iibiyo Farshaxanka iyo Alaabada Farshaxanka
Fundrise ma sharcibaa? Eeg Dib -u -eegid Buuxda
sida lacag looga sameeyo taleefanka
Fiiri Faallooyinka (50)
Waa maxay Lacagta Loolanka ah? Dulmar iyo Sida ay u Shaqeyso
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Cuntada 2022 | Hagaha Buuxa
Kumanaan ka mid ah isticmaalayaasha iPhone ma haystaan ​​wax fikrad ah inta lacag caddaan ah oo barnaamijyadooda ay u soo saari karaan iyaga. Wax badan…
9 Siyaabood Oo Xalaal Ah Oo Lacag Looga Sameeyo Pinterest Sannadka 2022 | $ 250/maalin
Ma rabtaa inaad ogaato sida lacag looga sameeyo Pinterest? Halkii laga fikiri lahaa inay tahay sawir wadaag fudud...
Neil Papworth waxa uu diray fariintii ugu horaysay 3rd Diisambar 1992. Marka loo eego CTIA iyo Worldwide statistics texting,…
Markaa, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo su'aal aad u fudud oo aan ku waydiiyo, waxaanan rajaynayaa inaadan dhib ku hayn.
15 Siyaabood oo Lacag Loogu Siinayo Daawashada Xayeysiisyada Fasaxaaga | 2022
In kasta oo wakhtiga firaaqada loo qorsheeyay in lagu raaxaysto, si kastaba ha ahaatee, wakhtiga firaaqada ee ka dhashay shaqo la'aanta ma aha mid lagu farxo. Mushahar qaata…
Maxay ka dhigan tahay in la iska qariyo barnaamijyada | Qeexitaanka ugu Fiican
Taleefannada casriga ah waa kuwo wax soo saar leh. Waxaan u adeegsanaa wicitaannada, farriimaha qoraalka, shabakadaha bulshada, sawirrada, raadinta degdegga ah, qulqulka muusikada, fiidiyaha,…